आज, खरिद अधिकांश इन्टरनेट मार्फत। त्यसैले, यो छैन वृद्धि लोकप्रियता सबै लेनदेन त्यो छ, विशेष विद्युतीय फारममा, जमानत को दर्ता बिना छन् जो मा संघीय marketplaces पाउन थाले कि अचम्मको छ। पछि आवश्यकताहरु भुक्तानी गर्न थप साधन हो आय को यस विशेष प्रकार, रूसी उद्यमीहरू स्वाद आयो। तथापि, यस्तो परियोजना मा सहभागी द्वारा आय प्राप्त गर्न, र जो कोहीले हुन सक्छ।
एक इलेक्ट्रोनिक व्यापार मंच के हो
ETP पारंपरिक ल्याप्टप द्वारा खरीद लागि विशेष डिजाइन वेबसाइट छन्। को लिलामी पहुँच कुनै पनि व्यापार एकाइ को भाग लिन सक्छ खोल्न कारण।
इलेक्ट्रोनिक व्यापार प्लेटफर्ममा सबै आवश्यक उत्पादन डाटा, साथै बारेमा काम अवस्था स्रोत मा प्रस्तुत। कारण ETP ग्राहकहरु र प्रदर्शन गर्ने विद्युतीय कागजात मार्फत अन्तरक्रिया।
द्वारा र यस प्रकारको ठूलो विद्युतीय स्रोतहरू अनलाइन स्टोर, मान्छे प्रस्ताव वा केही उत्पादन वा सेवा खरीद जहाँ तुलना गर्न सकिन्छ।
संघीय इलेक्ट्रोनिक व्यापार मञ्चहरूमा धेरै आधार मा वर्गीकृत छन्। पहिलो को खरीदार र विक्रेता आफ्नो प्रभाव स्तर assesses।
ETP पनि नियन्त्रण विधि द्वारा प्रतिष्ठित छ। यो मापदण्ड आधारित साइट हुन सक्छ:
स्वतन्त्र। यस मामला मा भर्चुअल अपरेटर द्वारा शासित हुनेछ।
नेट। यस्ता साइटहरू को मर्मतका लाइसेन्स कारोबार संलग्न छन्।
उद्योग। अक्सर, यस्तो ETP फरक अत्यधिक विशेष (जस्तै, पेट्रो उद्योग, रक्षा, र यति मा। डी)।
सहभागी संख्या साइट हो:
संघीय। यस मामला मा, ग्राहक प्रेरित रूपमा एक उद्यमी र सार्वजनिक संस्थाहरूको छ। अक्सर, संघीय marketplaces प्रमुख सार्वजनिक खरीद लागि प्रयोग गरिन्छ।
व्यावसायिक। यी स्रोतहरू आपूर्तिकर्ता र दुवै ग्राहकहरु वा तेस्रो दल छन्।
निजी व्यापार को लागि। यस मामला मा, बोलीदाताओं सम्पत्तिहरू किन्न वा आफ्नै तिनीहरूलाई बेच्न चाहने निजी व्यक्तिहरूलाई छन्। यस्तो सेवा मंच को राम्रो उदाहरण eBay मा छ।
सानो स्रोतहरू छन्, जो मा निजी व्यापार (उदाहरणका लागि, अनलाइन स्टोर), साथै साइटहरु राज्य ऋणीहरूलाई को निजी सम्पत्ति को कार्यान्वयन लागि। हामी पनि संघीय marketplaces र व्यावसायिक स्रोतहरू सूची विचार गर्नुपर्छ।
राज्य बजेट प्रयोग भुक्तानीको एक माध्यम रूपमा सेवा यस प्रकार मा। यो आधारमा सबै लेनदेन सरकार आदेश रूपमा छन्। ठूलो व्यवसायी यो मामला मा रूपमा, तिनीहरूले आरोप भुक्तानी प्राप्त गर्न प्रत्याभूति गर्दै, बस यस ETP विश्वास गर्छु। संघीय marketplaces शीर्ष5विचार गर्नुहोस्।
यस साइटमा प्रत्येक हप्ता 20 अरब rubles सम्म गर्दछ। यो यस स्रोत को लोकप्रियता प्रमाणित गर्छ। व्यक्तिगत यो डाटा, पर्याप्त संघीय को व्यापार तल्ला मा दर्ता र नवीनतम सम्झौताहरू बारेमा सबै तथ्याङ्क देखाउँदछ "हाम्रो बारे" खण्ड, जान प्रमाणित गर्न। कुनै पनि प्रयोगकर्ता एक विशेष क्षेत्र मा स्थिति विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
को RTS को मुख्य लाभ सेट मापदण्डहरु मा खोज क्षमताहरु छ। उदाहरणका लागि, तपाईं एक विशिष्ट संघीय व्यवस्था वा अन्य अवस्था निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
स्रोत प्रयोग गर्न, तपाईँले एक विशेष सफ्टवेयर र प्रमाणपत्र आफ्नो कम्प्युटरमा स्थापना गर्नुपर्छ। ब्राउजर कन्फिगरेसन स्वतः बाहिर छ। अहिलेसम्म भएका छैनन् लिलामी मा व्यक्तिगत भाग लिन तयार ती लागि, एक प्रशिक्षण केन्द्र, तपाईं ग्राहक वा विक्रेता तालिम undergo गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ सेट अप।
राष्ट्रिय खुद्रा साइटहरु accreditation रुचि ती, तपाईं पनि एक इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षरको वा बैंक ग्यारेन्टी प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ उपयुक्त खण्ड, जान पर्याप्त लागि।
यो क्षेत्र 2005 मा देखा पर्नुभयो र यसलाई सेन्ट पीटर्सबर्ग सरकारको विशेष व्यावसायिक नीलामी सञ्चालन मूल थियो। जीवनको4वर्ष एक व्यापार मंच को स्थिति, र आज प्राप्त गरेपछि उहाँले रूस मा शीर्ष 50 भन्दा सफल कम्पनीहरु छ। साइट मा ट्रेडों को एक किसिम आयोजित र सार्वजनिक खरीद कार्यान्वयन।
ETP Sberbank AST
यो साइट 2002 मा, एक सानो पहिले जन्म भएको थियो। आज यो सबैभन्दा यसको खण्ड मा प्रामाणिक रूपमा मान्यता छ। Sberbank AST आधारमा सरकार ग्राहकहरु स्वामित्व जो निविदा, 50% प्रत्येक वर्ष आयोजित छ।
यो क्षेत्र को मुख्य प्लस - स्रोत को प्रयोग, एक मानक वेब ब्राउजर इन्टरनेट एक्सप्लोरर मार्फत, तर र Google Chrome को मद्दतले मात्र छैन। अघिल्लो व्यापार संग र यस साइटमा विशेष राज्य-व्यापार बाहिर छन्। तर, व्यावसायिक उद्यमीहरू लागि "निर्माताहरु" रूपमा MICEX मा एक अतिरिक्त सेवा बुझे।
यो स्रोत बाँकी अन्य संघीय marketplaces धेरै फरक छैन। त्यहाँ पनि आधिकारिक र इलेक्ट्रोनिक नमूना हस्ताक्षर हुन सक्छ।
को ETP को मुख्य संस्थापक 48% का लागि खाताहरू जो मास्को को बैंक, र मास्को को सरकार (52%) छ। यहाँ तपाईं अन्य सरकारी ग्राहकहरु को एक विशाल नम्बर (रक्षा, आपतकालीन अवस्थाहरू मन्त्रालय मन्त्रालय र यति मा। डी) पाउन सक्छन्। आज कुल Rosseltorga3लाख भन्दा बढी विभिन्न कम्पनीहरु पाउन सक्नुहुन्छ।
यो ETP पनि प्रशिक्षण सेवाहरू (रिमोट वा पूर्ण-समय) प्रदान गर्दछ। साथै, साइट समय समयमा खुला Rosseltorga स्वामित्व व्यापार छ। प्राविधिक सहयोग सेवा अवरोध बिना हरेक दिन खुला छ।
वेब मा माथि साइटहरु बाहेक तपाईं अन्य स्रोतहरू कि व्यक्तिहरूलाई पनि लिलामी भाग लिन अनुमति को एक धन पाउन सक्नुहुन्छ।
हामी यी साइटहरूमा बीच मतभेद कुरा भने, व्यावसायिक व्यापार र दर्ता सामान्यतया भुक्तानी भएको छ। साथै, यस प्रकारका साइटहरू साधारण प्रस्ताव उत्पादनहरु को एक विविध दायरा ठूलो मात्रा खरिद पूरा गर्न रुचि जो ठूलो ग्राहकहरु, "फेला" छन्।
व्यावसायिक व्यापार को प्रणाली र भविष्यमा कार्यहरू योजना र पहिले नै प्रतिबद्ध लेनदेन मा तथ्याङ्क डाटा संकलन गर्न मद्दत गर्छ। साथै, तिनीहरूले ग्राहकहरु 'आवश्यकता ट्रयाक राख्न र तिनीहरूलाई सबैभन्दा लाभदायक सामान प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, यस्तो विद्युतीय आदानप्रदान विशेष प्रतियोगिताहरु र नीलामी, सामान्यतया नयाँ ग्राहकहरु आकर्षित उद्देश्य जो भाग गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, धेरै उद्यमीहरू व्यापक आकर्षित छन् ग्राहक आधार, यी स्रोतहरूमा प्रतिनिधित्व छ जो।
ठीक स्थिति र उत्पादन को दायरा विस्तार गर्न समय समयमा, आफ्नो कम्पनी प्रचार यदि यो उत्कृष्ट परिणाम हासिल गर्न सम्भव छ। , तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् अधिक लाभ संभावित ग्राहकहरु संग थप सक्रिय सहभागिता हुनेछ।
इन्टरनेट मा पैसा कमाउन कार्यक्रम। वेबमा कमाउन को तरिका
एक शुरुवात लागि Freelancing विनिमय: बजार को अवलोकन। कमाउन मुद्रा अनलाइन
औसत स्वतंत्र आय। धेरै फ्रीलांसरों जस्तै कमाउन छन्?
दोकान अनलाइन एप्पल बिक्री: समीक्षा
एक कठिन अवस्था, काम बाहिर मा निष्कासन आफ्नै अनुसार इच्छा सक्षम परिवर्तन जब
पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट - यो के हो? ब्रान्ड, विनिर्देशों
ब्रेक पैड VAZ-2110: कसरी विस्थापन गर्न?
जो विवाह मित्र को लागि एक पोशाक चयन गर्न?
प्रति milliliter ग्राम कति ठीक बाहिर कसरी पाउन?
JVC कार रेडियो
जहाँ रूस मा सेप्टेम्बर मा छुट्टी मा जाने? शीघ्र
मोटरसाइकल यामाहा FJR-1300: अवलोकन, विशेषताहरु, सुविधा र समीक्षा
MAZ-54323: प्राविधिक विशेषताहरु, सुविधा र क्षेत्रीय
इन्टरनेटमा व्यक्तिगत डाटा को संरक्षण
आईएमएफ ट्रान्सक्रिप्ट। लक्ष्य, उद्देश्य र दुनिया मा संगठनको भूमिका